मुर्कुट्टाको अन्ध–राष्ट्रवादी खेल -गोपाल किराती «
मुर्कुट्टाको अन्ध–राष्ट्रवादी खेल -गोपाल किराती
प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७५, शनिबार १८:१९
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारे नेपाली दृष्टिकोण’ शीर्षकमा विचार गोष्ठी ग¥यो । ०७५ भदौ ९ गते काठमाडौंमा आयोजित उक्त गोष्ठीमा प्रा. डा. गोपाल शिवाकोटी, प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी र प्रा. डा. केवी रोकाया अतिथि वक्ता हुनुहुन्थ्यो । सामान्यतः शिवाकोटी र केसीका विचारहरु तथा विशेषतः रोकायाका विचारहरुको आलोचनामा यो आलेख केन्द्रित छ ।
डा. शिवाकोटीको भनाई थियो कि हिजो राजाको इच्छा नै विदेश नीति हुन्थ्यो, अहिले दुई चार जना नेताको इच्छामा भर परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको राष्ट्रिय नीतिको विस्तार हो । स्वाधीनता, स्थायित्व र व्यक्तित्व विकासको हैसियत नै परराष्ट्र सम्बन्धका आधार हुन् । विदेशबाट पैसा ल्याएर समाजवाद स्थापना गर्ने ती नेताहरुको चिन्तन छ । वेलायत–फ्रान्सले पैसा पठाएर साम्राज्य विस्तार गरे । हाम्रा नेताहरुले भने विदेशी सहयोग लिएका छन् ।
डा. शिवाकोटीको भनाई थियो–चीनसँगको सम्बन्ध उचाईमा पुगेको भन्ने सरकारले चार वर्षमा राष्ट्रपति ल्याउन सक्दैन । भारतसँग सम्बन्ध विस्तार भयो भन्छन्, त्यसको अर्थ कुनै पनि दिन नेपालमा भारतीय सेना विस्तार होला । ढाँटको हद भयो । परराष्ट्र सम्बन्ध बारे आम जनतामा व्यापक वहस गराएर नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । नेपालको विदेश नीति बनेकै छैन, रणनीति मात्र छ ।
डा. सुरेन्द्र केसीको भनाई थियो कि नेपालमा बुद्धिजीवी नै छैनन्, जति छन् ति केवल भक्तहरु हुन् । यूरोपमा रुसो, भोल्टेयर, हेगेल, माक्र्स तथा रुसमा टोल्सटोय, प्लेखानोभ, गोर्की हुँदै आफ्नो राष्ट्रिय विकास गरे । नेपालमा जसले कम्यूनिष्ट पार्टी स्थापना ग¥यो, उसैलाई गद्धार भनेर उछितो काडियो । यहाँ त प्रायोजित वक्ता, प्रायोजित मन्त्री छन् । हिजो समाजवादी मुलुकहरुले उपहार दिएको नेपाली उद्योगमा प्रहार भयो । नेपालको बजेट १३ खर्ब छ, तर व्यापार घाटा ११ खर्ब । यो परिस्थितिमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बारे के भन्ने ? जे होस् २१ औं सताब्दीको राष्ट्रवाद आर्थिक राष्ट्रवाद बनेको छ ।
डा. शिवाकोटी र डा. केसीको विचारमा आक्रोश मिश्रित स्वभाविकता, राष्ट्रिय चिन्ता एवं प्रगतिको दिशावोध प्रष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ । तर डा. रोकायाको विचारमा त्यस विपरित अस्वभाविकता, अराष्ट्रियता तथा दुर्गति पोख्ने काम भएको छ । रोकायाको त्यस विचारमा आलेख केन्द्रित गरौं ।
प्रा. डा. केवी रोकायाको भनाई थियो–प्रजातन्त्रको जननी वेलायतमा रानी छ, जो चर्चको प्रमुख पनि हुन् । अमेरिकामा ट्रम्पलाई ईश्वरले भोट हाले भन्छन् । वेलायत, अमेरिका, रुस, चीन र भारत सबै धर्मतिर केन्द्रित छन् । यो किनभने समाजमा अराजकता बढ्यो, मानिस नाङ्गै हिड्न थाले । बाबु–छोरी, आमा–छोरा विहे गर्न थाले । त्यो अराजकता रोक्न धर्म चाहियो । धर्मले मात्र राष्ट्रिय हित र नैतिकता कायम गर्ने भयो । नेपालमा अब ठूलो आन्दोलन हुन्छ । त्यसको नेतृत्व वुद्धिजीवीले गर्छन् । तर त्यसको राजनीतिक नेतृत्व कसले गर्छ ? अबको राजनीतिक निकै गाह्रो छ, दाँत बलियो पार्नुस ।
त्यस अगावै उपरोक्त विचारको नेपाली राजनीतिका लागि डा. रोकायाले युट्युव अन्तर्वार्तामा भनेका थिए–नेपालमा राष्ट्रियता र नैतिकताका लागि हिन्दु राज्य, शाहवंशीय राजतन्त्र र सेना चाहिन्छ । प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा रानी र चर्च प्रमुख तथा अमेरिका, रुस, चीन, भारत सबैतिरको राजनीति धर्मतर्फ केन्द्रित भन्नुको तात्पर्य नेपालमा सेनाको बलमा हिन्दु राजतन्त्र पुनः स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने नै हुन्छ । अब गणतन्त्र नेपालमा डा. केवी रोकायाको विचारलाई के भन्ने ?
ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिले अध्ययन गर्ने हो भने २० वर्ष अघि नेपालमा मोवाइल फोन थिएन, ३० वर्ष अघि टेलिभिजन र कम्प्युटर थिएन । सय वर्ष अघि मोटरगाडी र विजुली थिएन । पृथ्वीमा चार सय वर्ष अघि उद्योग थिएन । आठ हजार वर्ष अघि मानिस जंगलमा हुन्थे, त्यसअघि मानिस नाङ्गै रहन्थे । चार अर्ब वर्ष अघि पृथ्वी नै थिएन, पाँच अर्ब वर्ष अघि सूर्य थिएन र १३ अर्ब वर्ष अघि ब्रह्माण्ड नै थिएन । ब्रह्माण्ड नभएपछि प्रकाश, वायु र समय हुने कुरा नै भएन ।
प्रकृतिमा मानव विकासक्रमलाई अध्ययन गर्दा डा. केवी रोकायाको विचार वस्तुतः प्रतिगामी छ र त्यसले अन्ततः समय नै नभएको शुन्यवादमा फसाउँछ । अतः रोकाया विचारको दार्शनिक आधार शुन्यवाद हो भने त्यसको अर्थ–राजनीति चरम अन्धराष्ट्रवादमा आधारित छ । यो सत्य हो कि कम्युनिष्ट नामधारी बहुमतको सरकार राष्ट्रियता, जनवाद, जनजिवीका विरोधी रबैया अख्तियार गरिरहेको छ । परन्तु अग्रगामी नागरिकका लागि ओली–प्रचण्डको विकल्प शुन्यवाद हुन सक्दैन ।
वर्गसंघर्षको इतिहासमा सर्वहारावर्गको दुश्मन पूँजीवाद साम्राज्यवादमा बदलियो । आफ्नो मुलुकका मजदूरहरुको शोषणले मात्र नपुगेर पूँजीवादीहरु अरु मुलुकमाथि आक्रमण गर्दै ती मुलुकका साधनस्रोत र जनशक्तिमाथि झम्टन पुगे । पूँजीवादको त्यही अवस्थालाई साम्राज्यवाद भनियो । वास्तवमा साम्राज्यवादीहरु खड्ग ओली र प्रचण्डलाई पनि ‘कम्युनिष्ट’ देख्दछन् । जवकि माओवादी क्रान्तिकारीहरु र वर्ग सचेत नेपाली जनता ओली र प्रचण्डलाई किमार्थ कम्युनिष्ट मान्दैनन् । यदि ओली–प्रचण्डहरु लैस कम्युनिष्ट भईदिएका भए माथेमा प्रतिवेदन लागू गराउन डा. गोविन्द केसीले २७ दिन अनशन बस्नु पर्ने थिएन ।
अतः प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा डा. रोकायाको विचार साम्राज्यवाद प्रभावित छ । साम्राज्यवादयता सामन्तवाद त्यसको मतियार बन्दै आएको छ । नेपालमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र पूँजीवादी गणतन्त्र घोषणाबाट राजनीतिक संरचनामा सामन्तवादको अन्त्य गरिएको छ । तर संस्कृतिमा सामन्तवाद यथावत छ भने यसको अर्थ–राजनीति दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिको हातमा छ । विद्धितै छ कि दलाल पूँजीवाद भनेको राष्ट्रिय हित पक्षधर हुँदैन । अर्थात् साम्राज्यवादी युगमा दलाल पूँजीवादी अर्थ–राजनीति राष्ट्रियता विरुद्ध केन्द्रित हुन्छ ।
डा. केवी रोकाया व्यक्तिगत स्वभावले भद्र मानिस हुन् । ०५३ मा एक विचार गोष्ठीमा हाम्रो प्रथम भेट भएको थियो । जलस्रोत सम्बन्धी विद्यावारिधी गरेका रोकाया ०६८ मा हामी संस्कृति मन्त्री हुँदा गठन गरिएको समाधीस्थल व्यवस्थापन कार्यदलमा ईसाइका तर्फबाट प्रतिनिधि थिए । उनको पहिलो युट्युव अन्तर्वार्ताले पश्चिमा जगतमा माओवादी आन्दोलन बारे सन्देश पु¥याएको जानकारी दिएको छ । तर माओवादी केन्द्रको उक्त गोष्ठीमा रोकाया भन्दै थिए–विविसीमा आठ मिनेटको अन्तर्वार्ता दिएँ, राप्रपाले मलाई धन्यवाद दियो । उनलाई राप्रपाको धन्यवाद किन चाहियो ?
साम्राज्यवाद र कांग्रेस सहित पूँजीपतिवर्ग कम्युनिष्ट नामधारी ओली र प्रचण्डको सरकारबाट आतंकित बनेका हुन् भने त्यसको एक मात्र प्रयोजन क्रान्तिकारी कम्युनिष्टलाई बद्नाम गर्नु हो । सच्चा कम्युनिष्ट सरकारको प्रशासनमा नैतिकताको आधार के हुन्छ ? रोकाया महोदयले फ्रेडरिक एंगेल्सको “ड्युहरिङ मत–खण्डन” ग्रन्थ पढ्ने कष्ट गर्नै पर्छ । त्यसमा एंगेल्स लेख्दछन्–‘निश्चय नै त्यस नैतिकतामा स्थायित्वको तत्व सबभन्दा बढी हुनेछ, जसले वर्तमान कालमा वर्तमानको पराजयको प्रतिनिधित्व गर्छ, भविष्यको प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यो हो–सर्वहारा नैतिकता ।’ (१२१)
तब प्रश्न उठ्छ, के ओली र प्रचण्डको गणितीय बहुमतको सरकारसँग त्यस्तो सर्वहारा नैतिकता देखिएको छ ? किमार्थ छैन । बरु ओली र प्रचण्डहरु त बादलले शुरु गरेका जनपक्षीय सुधारका कामहरु रोक्न अभिजातवर्गीय अनैतिकता प्रदर्शन गरिरहेछन् । अतः नेपाली राजनीतिमा सर्वहारा नैतिकता अर्थात समाजवादी लोकतन्त्र जरुरी छ, जसको निम्ति माओवादी क्रान्तिकारीहरु संघर्षरत छन् । डा. रोकायालाई ज्ञात हुनै पर्छ कि लेनिनदेखि स्टालिनको पालासम्म सोभियत समाजमा तथा माओ त्सेतुङको पालमा चिनीया समाजमा कोहि पनि नाङ्गै हिडेका थिएनन् ।
अर्को, माओवादी नै नभए पनि देशभक्त मुलुक उत्तर कोरिया र क्यूवामा कोहि पनि नाङ्गो हिड्दैनन् । तब बेलायत, अमेरिका, पूँजीवादी रुस र चीनमा मात्र मानिस नाङ्गै हिड्ने अनैतिकता प्रदर्शनमा किन लागेका छन् ? यसको वैज्ञानिक जवाफ सर्वहारा नैतिकताको माग हो न कि विज्ञान विरोधी धर्मसत्ता ।
गणतन्त्र हटाएर राजतन्त्र फर्काउने हो भने शाहवंशीय राजतन्त्र मात्र किन फर्काउने ? तलेजु मन्दीरमा चढेर प्रजाहरुको धुरीमा धुवाँ आयो आएन भनेर हेर्ने प्रजाप्रेमी मल्ल राजतन्त्र किन नफर्काउने ? नेपालमा सामन्तवादको स्थापना गर्ने लिच्छवि राजतन्त्र किन नफर्काउने ? अझ डा. पेशल दाहालका अनुसार नेपाल राज्यको संस्थापक किराती राजतन्त्र किन नफर्काउने ? यसो गर्दै नेपाली जनतालाई फेरि जंगली युगमा किन नफर्काउने ? धर्मनिरपेक्षता हटाएर राजतन्त्र तथा नागरिक सर्वोच्चता हटाएर सैनिक सर्वोच्चता फर्काउने कुरामा पनि सत्य त्यहि हुनेछ, जुन राजतन्त्र फर्काउने कुरासँग सम्बन्धित छ ।
स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको प्रश्नमा नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । आफूलाई कम्युनिष्ट बताउनेहरुले नारा र केवल इन्द्रिय ग्राह्य ज्ञानमा सीमित नरहेर भौतिकवादी सर्वहारा संस्कृतिलाई धारणागत ज्ञानको गहिराइमा पु¥याउनु पर्छ । पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर राणाको गोर्खाली राज्य विस्तारद्वारा पराजित राष्ट्रिय समुदायको पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । त्यसरी गोर्खालीद्वारा पराजितमध्ये खसानका खस जनता पनि हुन् भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । मुख्यतः सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण खारेज गरी अबोप्रान्त एक पैसा विदेशी ऋण नलिने राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्छ ।
हुनसक्छ, डा. केवी रोकाया हिन्दु अतिवादीहरुको हो मा हो मिलाएर ईशाइहरुको संरक्षण गर्दै छन् । परन्तु उहाँका अभिव्यक्तिहरुको आधारमा वस्तुतः रोकायामा गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादको भूत सवार छ । पूँजीवादी गणतन्त्र नेपालमा गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादको वास्तविक प्रतिनिधित्व खड्ग ओलीले गर्छन् । गोर्खाली अन्धराष्ट्रवाद नेपाली राष्ट्रवाद विरुद्ध छ । अतः गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादको उन्मुलनद्वारा सच्चा नेपाली राष्ट्रवादको सुनिश्चितताले मात्र राष्ट्रियताको समस्या हल गर्छ । रुढीवादी मान्यतामा टाउको बिनाका भूतहरु हुने बताइन्छ, जसलाई ‘मुर्कुट्टा’ भन्छन् । वस्तुतः डा. रोकायाको विचार अन्धराष्ट्रवादी मुर्कुट्टा विचार हो । मुर्कुट्टा विचार भनेको वास्तवमा विचार नै होइन । किनभने, विचार टाउकोमा हुन्छ । जब केवी रोकाया विचारको टाउको नै नभएपछि त्यो विचार हुने कुरै भएन ।
अतः रोकाया जस्तो जलस्रोत विज्ञानमा विद्यावारिधीलाई मुर्कुट्टा विचार त्याग्न सही सल्लाह दिनुपर्छ । नभए देशभक्त तथा प्रगतिशील नागरिकले त्यस्तो प्रतिगामी, शुन्यवादी चलखेल अस्वीकार गर्नुपर्दछ र खासगरी भविष्यमुखि यात्रामा अग्रसर बन्नु पर्दछ । वेलायती प्रजातन्त्र संसदीय व्यवस्थामा आधारित छ । संसदीय व्यवस्था एक मात्र लोकतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने तथ्य स्वतः प्रष्ट छ । विद्यमान संक्रमणकालीन नेपाली समाजको ऐतिहासिक निरुपण समाजवादी गणतत्र हो न कि डा. रोकायाको प्रतिगमन । त्यस्तै वेलायत, अमेरिका, रुस, चीन तथा भारत आदि मुलुकमा जुन अन्धराष्ट्रवादी शासन प्रवल हुँदैछ, त्यसको परिणाम भयानक अन्तर–साम्राज्यवादी युद्ध या तेश्रो विश्वयुद्ध हो । त्यस विरुद्ध शान्ति र प्रगतिका पक्षधरले क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्छ ।
भीम रावलको उमेदवारको नामावलीमा नै ग’लत देखियो
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले उमेदवारको नामावलीमा त्रु’टि रहेको जनाएका छ । चितवनमा जारी दशौं